भर्खरै चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका प्रस्तोता कृष्ण कँडेल माथि भारतिय सैनिकको आक्रमण – पुरा हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका प्रस्तोता कृष्ण कँडेल माथि भारतिय सैनिकको आक्रमण – पुरा हेर्नुहोस
भर्खरै चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका प्रस्तोता कृष्ण कँडेल माथि भारतिय सैनिकको आक्रमण – पुरा हेर्नुहोस
admin February 24, 2019 समाचार	0
काठमाडौ । नेपालमा लोक दोहोरि क्षेत्रको लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीको टोली माथि भारतिय सिमा सुरक्षा बलले आक्रमण गरेका छन् । इन्द्रेणी स्टुडियोबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको दौरानमा कञ्चनपुर पुगेका कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कंडेल लगायत इन्द्रेणी टिममाथि आक्रमण भएको उनले भिडियो मार्फत जानकारी गराएका छ्न् ।
भारतीय एसएसबिले कार्यक्रमा लागि कञ्चनपुर नेपाल-भारत सिमा नजिक पुगेका इन्द्रेणी टोलीका क्यामरा मेन दिपक घिमिरेले खिचिरहेको भिडियो क्यामरा खोसेर खिचिएको सामाग्री डिलिट गरिदिएका हुन। कृष्ण कंडेलले अपलोड गरेको भिडियो मार्फत बोल्दै त्यस वडाका वडा अध्यक्षले भने नेपाली बनमा गाइ भैंसी चराउन जाँदा भारतलाई रोयाल्टीतिर्नुपर्ने अवस्था छ। । हामी सत्तामा पुग्नलाई मात्र यस क्षेत्रको नाम प्रयोग गर्छौं सरकारमा पुगेपछि फर्केर हेर्दैनौं, उनले भने।
यो ठाउँ यहि हो जहा दुइ बर्ष पहिले भारतीय सिमा सुरक्षाबलका जवानहरुले नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्ने क्रममामा रोक्न खोज्दा भारतीय प्रहरीको गोलि प्रहारबाट गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो।
कृष्ण कंडेलले लिएको भिडियो अन्तर्वातामा बोल्दै स्थानीयहरु आफु त्रशित रहेको बताएका छन्। “उनीहरु कुनबेला आउने हुन् थाहै हुँदैन, हाम्रो तिर आएर जे पनि गर्छन नेपाल सस्त्र प्रहरी मुख दर्शक भएर बस्नु बाहेक क्यै गर्दैन। हाम्रा छोरी चेलीहरुलाई पारी पट्टि घाँस दाउरा गर्न जाँदा उतै बलात्कृत हुने पो हुन कि भन्ने डर लाग्छ। एक स्थानीयले भिडियोमा भनेका छन्।
स्थानीयहरु सरकारले तुरुन्तै सिमा सुरक्षको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। गोविन्द गौतम शहिद भएको दुइ बर्ष पुगिसक्दा पनि उनको परिवारले सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको स्थानीय हरु बताउछन। भारतीय सिमा सुरक्षाबलले यस पटक मात्र नभएर पटक पटक नेपाल-भारत सिमा नजिक बस्ने नेपाली नागरिक हरुलाई दुख दिदै आएको छ। नेपाल भित्रै नेपाली भुमि प्रयोग गरे वापत रोयाल्टी तिर्नुपर्ने वाध्यतात्मक अवस्था सिमा वासीहरुको छ।
कृष्ण कडेंल संगसंगै सिमावर्ती वस्तीका वासिन्दाहरु देशभक्ति गित गाउँदा कुर्सीमा बसेका गोविन्द गौतमका बुवा-आमा धुरुधुरु रोइ रहेका थिए। गोविन्द गौतमको मृयु हुँदा सरकारले विभिन् प्रकारका आशा देखाएपनि अहिले कुनैपनि पुरा नगरेको गौतमकी आमा बताउछिन। सरकारले सुकुम्बासी जग्गा नम्बर बनाइदिन्छु भन्यो, काम खोजिदिन्छु भन्यो अहिले यस्तो छ हालत, उनि भन्छिन।
गोविन्द गौतमको मृत्युहुँदा सरकरले दश लाख, कांग्रेसले सात लाख र एमालेले साढे ५ लाख सहयोग गरछौँ भनेका थिए त्यो दिनबाट फुटेको सुक्को कौरी समेत देखेका छैनौं। भाबुक मुद्रामा गौतमका बुबाले भने।
पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने राउटेहरूलार्इ सरकारले दियो यस्तो खुशीकाे खबर
तपाईको यो साता कस्तो छ ? हेर्नुहोस् फागुन (१२-१८ ) साप्ताहिक राशिफल
राजधानीमा जग्गा हुनेहरूका लागि सरकारले ल्याउँदै यस्तो निति!
पत्याउँनै नसकिने खुसिको खबर ! नेपालको ‘पानीजहाज जोडिएको जलमार्ग मोदीद्धारा उद्घाटन (भिडियो सहित)
डेढ महिना अघि विहे गरेर भित्र्याएकी श्रीमती उनका लागि काल बनिन्।। छोराको काल बनेर बुहारी भित्रिएकी रहिछिन्’